Iincwadi ozilahlayo, ezinye ziphinda zisetyenziswe | Uncwadi lwangoku
Ngaba uyazi ukuba e-Ankara (Turkey), iinkonkxa zenkunkuma abaqokelela inkunkuma ebusuku baphinde bayihlaziya kwakhona nganye nganye iincwadi ezifunyanwa kwizikhongozeli? Ngaba uyazi ukuba ezi ncwadi ezazibonakala zingenabomi ngoku zikhanya zishelfini zomzi-mveliso omdala? Akunjalo? Ewe, ukuba ufuna ukwazi okungakumbi malunga neli phulo lilungileyo kunye nenkcubeko, qhubeka ufunda.
ILayibrari yeNcwadi ehlaziyiweyo
Khawufane ucinge nje okomzuzwana usebenza ebusuku njengomntu olahla inkunkuma esixekweni sakho kwaye kwelinye lala majiko nelori yenkunkuma, ufumana ubusuku ngabunye incwadi enye okanye ezimbini ziphoswe ngokungathi ziyinkunkuma eplastikini. Ungathini? Ndicinga ukuba impendulo iya kwahluka ngokuxhomekeke "kuthando" oziva ngalo ngeencwadi ... Akunjalo? Ewe uyayibona loo nto Indawo yokulahla inkunkuma yase-Ankara, ETurkey, bawaxabisa kakhulu amaphepha abhaliweyo avela kwihlabathi lonke kwaye bebeqokelela iincwadi ukwenza ithala leencwadi kunye nabo.
Eli thala leencwadi "lavulwa" kwiinyanga nje ezisi-7 ezidlulileyo kwaye ngoku linenani elipheleleyo le- Iincwadi ze-4.750 Kwityala lakhe, konke kuqokelelwe kwaye kwaqokelelwa kudoti ngexesha lomsebenzi. Ithala leencwadi labekwa kwindawo ye- umzi-mveliso omdala eyayilahlwe ngaphezulu kweminyaka engama-20. Ngoku, eli thala lencwadi alisetyenziselwa nje ukuboleka iincwadi kwaye uzonwabele ekhaya kangangeentsuku ezili-15, kodwa xa amadoda enkunkuma eqokelelene, ukuphumla okanye ukuchitha usuku kunye, bayenza apho kwaye ukongeza kufundo badlala ichess.
Nangona umgaqo wawusenziwa ukuba ucinge ngaphezulu kwabo malunga nezihlobo zabo, ngoku ithala leencwadi yindawo kawonke-wonke onokufikelela kuyo ngaphandle kwengxaki ukuba ufuna ukuboleka enye yeencwadi zabo.
Eyona nto intle ayisiyovolthi esele beyiphindile, kodwa kwiibhokisi ezilindelekileyo nangaphezulu Iikopi ze1.500 ukubekwa.
Ucinga ntoni ngeli nyathelo limangalisayo? Ngaba ucinga ukuba kwilizwe lakho ungabona inyathelo elifanayo okanye elifanayo namhlanje?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iincwadi ozilahlayo, ezinye ziyarisayikilisha
Ursula K. Le Guin usweleke eneminyaka engama-88
URupi Kaur ubufazi, imibongo kunye ne-Instagram